Sorona Masina ny 22/09/2019 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 22/09/2019
ALAHADY FAHA-25 mandavantaona — D
Aza vidîna vola ny fadiranovana.
Mihainoa izao, ianareo mihinana ny mahantra, sy mitady hamongotra ny mavomavo amin’ny tany, manao hoe: “Rahoviana no ho tapitra ny voaloham-bolana; mba hahazoantsika mivarotra vary; ary ny sabata mba hamohantsika ny tranom-bary, ka ny efaha hakelezina; ny sikla hampitomboina; ny mizàna, hatao mandainga, hamitahana. Dia hovidintsika vola ny fadiranovana, ary ny mahantra, noho ny amin’ny kapa iray lomisy, sady hivarotantsika ny vary loha-kororoka?” Efa nianiana tamin’ny reharehan’i Jakôba ny Tompo nanao hoe: “Tsy hohadinoiko mandra-piavin’ny farany, izay rehetra nataon’izy ireo”.
Fiv.: Derao ny Tompo, Ilay manandratra ny mahantra avy ao an-jezika.
Miderà, ry mpanompon’ny Tompo: derao ny Anaran’ny Tompo: Ny Anaran’ny Tompo anie hisaorana hatrizao ka ho mandrakizay!
Ambonin’ny firenena rehetra ny Tompo; ambonin’ny lanitra ny voninahiny. Iza no tahaka ny Tompo Andriamanitray, Ilay mipetraka ambony dia ambony, nefa miondrika mba hitazana ny any an-danitra sy ny ety an-tany?
Izy ilay manala ny ory amin’ny vovoka, manandratra ny mahantra eo an-jezika mba hampitoerina anilan’andriana, dia ny andriandahin’ny vahoakany.
Izany no tsara sy ankasitrahina eo imason’Andriamanitra, Ilay tia ny hahavonjy ny olona rehetra,
Ny angatahiko voalohany indrindra, dia ny hanaovana fivavahana, fangatahana, fifonana, ary fisaorana ho an’ny olona rehetra, ho an’ny mpanjaka sy ho an’ny manam-pahefana rehetra, mba hiainantsika amim-piadanana sy fandriam-pahalemana, amim-panajana an’Andriamanitra sy fahamaotonana tanteraka. Izany no tsara sy ankasitrahina eo imason’Andriamanitra Mpamonjy antsika, izay tia ny hahavonjy ny olona rehetra, sy ny hahatongavany amin’ny fahalalana ny marina. Fa iray monja Andriamanitra, ary iray ihany no Mpanalalana amin’Andriamanitra sy ny olombelona, dia i Kristy Jesoa tonga olombelona, izay nanolotra ny Tenany ho avotry ny olombelona rehetra: zavatra voaambara tamin’ny fotoany izany, ary ny hitory izany no nametrahana ahy ho mpitory sy Apôstôly ary ho mpampianatra ny Jentily amin’ny finoana sy ny fahamarinana; milaza ny marina aho, fa tsy mandainga. Koa ny lehilahy, tiako hivavaka na aiza na aiza, manandra-tanana madio, tsy amim-pahatezerana na tabataban-tsaina.
Izay tia Ahy dia hitandrina ny teniko ka ho tian’ny Raiko ary hankao aminy Izahay ka honina ao aminy.
Lk. 16, 1-13 (lava) na 10-13 (fohy)
Tsy afaka manompo an’Andriamanitra sy ny vola ianareo.
Tamin’izany andro izany, i Jesoa nanao ity fanoharana ity tamin’ny mpianany: “Nisy lehilahy mpanan-karena anankiray nanana mpitandrim-pananana izay nampangain’ny olona taminy fa nandany ny fananany. Dia nantsoiny izy ka nilazany hoe: ‘Ahoana izany fandrenesako anao izany? Avoahy kely hoe ny fitandremanao, fa amin’ny sisa dia tsy hahazo miadidy ny fananako intsony ianao’. Tamin’izay ilay mpitandrina dia nanao anakam-po hoe: ‘Inona re no hataoko, fa esorin’ny tompoko amin’ny fitandremana ny fananany aho ity. Ny miasa tany moa tsy vitako, ny mangataka indray mahamenatra ahy. Aoka fa fantatro izay hataoko, mba handraisan’ny olona ahy any an-tranony rehefa esorina amin’ny raharahako aho’. Dia nampanalainy tsirairay izay rehetra nitrosa tamin’ny tompony, ka hoy izy tamin’ny voalohany: ‘Ananan’ny tompoko hoatrinona ianao?’. Namaly io hoe: ‘Diloilo injaton’ny barika’. Dia hoy ny mpitandrina taminy: ‘Raiso ny taratasinao, ary mipetraha ka soraty haingana dimampolo’. Dia hoy indray izy tamin’ny anankiray: ‘Hoatrinona kosa ny trosa aminao?’. Namaly kosa io hoe: ‘Vary injaton’ny famarana’. Dia hoy ilay mpitandrina: ‘Raiso ny taratasinao dia soraty valopolo’. Noderain’ny tompony ilay mpitandrina tsy marina, satria nampiseho hafetsena, fa hendrihendry kokoa ny zanak’izao tontolo izao amin’izy samy izy noho ny zanaky ny fahazavana. Ka hoy Aho aminareo: Aoka ny harena tsy marina no hahazoanareo sakaiza, mba handraisany anareo any amin’ny tranolay mandrakizay raha avy izay haharerahanareo”.
Eto no manomboka raha ny fohy no atao, ka izao no anombohana azy:
(Tamin’izany andro izany i Jesoa niteny tamin’ny mpianany hoe:)
“Izay mahatoky amin’ny kely, dia mahatoky amin’ny lehibe, ary izay tsy marina amin’ny kely, dia tsy marina koa amin’ny lehibe. Koa raha tsy mahatoky amin’ny harena tsy marina ianareo, iza no hametraka aminareo ny harena marina? Ary raha tsy mahatoky amin’izay tsy anareo ianareo, iza no hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa na hankahala ny iray izy ka ho tia ny anankiray; na homba ny anankiray kosa ka hanamavo ny iray indray. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy ny harena ianareo”.
Ry kristianina havana, tsy natao hotompoina ny vola aman-karena, fa natao hoenti-manompo an’Andriamanitra sy ny namana, koa mangataha isika mba hahay hifidy an’Andriamanitra fa tsy ny vola, ary hitsinjo ny ory amin’izay harena eo an-tanantsika.
Valy: Ianao no Rainay sy Andriamanitray.
* Mivavaha ho an’ny Eglizy mba ho hita bebe kokoa hatrany fa Eglizy mpamonjy ny ory izy sy mpampihavana ny olombelona amin’Andriamanitra sy amin’ny samy olombelona.
* Mivavaha ho an’ireo rehetra manan-toerana sy andraikitra amin’ny fitondram-bahoaka, mba hampian’Andriamanitra tsy ho resin’ny vola sy ny fanangolena, ary mba ho tena mpanasoa ny vahoaka tokoa.
* Mivavaha ho an’ny firenena rehetra eran-tany mba hahay hifanatona sy hifanaja ary hifanampy tsy misy fihatsarambelatsihy, hampandroso ny fiadanana araka an’Andriamanitra.
* Be ny raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana sahiran-tsaina lava izao, mieritreritra ny vola tsy ampy, ka mivavaha mba ho araka ny rariny ny fitsinjarana ny vola eo amin’ny fiainam-bahoaka.
* Mivavaha ho an’ny fiangonantsika: mba tsy ny fiaraha-mivavaka ihany no hisehoantsika, fa ny fifanampiana sy ny fifamonjena isan-karazany eo amin’ny fiainana mihitsy.
Tompo ô, ampianaro izahay ho mpanomponao hahay hanorina ny Fanjakanao; ary enga anie mba ho kinga noho ny zanaky ny maizina ireo zanaky ny mazava ampian’ny fahasoavanao.
Prefasy: Vavaka Fisaorana faha-8 na 9, ohatra.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0807 s.] - Hanohana anay